Rosia: Hifidy sa Tsy Hifidy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2018 17:00 GMT
Hifidy – sa tsy hifidy? ”Hifidy amin'ny tongotrao” – sa hanaraka ny torohevitr'i Mikhail Khodorkovsky (Ros, nadika ato) ary hifidy ny iray amin'ireo antoko kely indrindra tsy ”ambanianao”? Hanao ankivy ny fifidianana – sa hanimba ny vatom-pifidianana? Ho hahitsy tsara sy hanamarina ny iray amin'ireo efajoro kely fandatsahambato – sa ho lasa maditra ary hanoratra teny ratsy mameno ilay pejy?
Ireo no fanontaniana toa banjinin'ireo Rosiana blaogera vitsivitsy amin'izao fotoana izao.
Tapa-bolana lasa izay, hitan'i tvoron, mpampiasa LJ iray, ny petadrindrina vita tanana iray tao amin'ny toerana fiatoan'ny fiara fitaterambahoaka tao Moskoa izay, amin'ny fiteny somary mivantambatana kokoa, dia nitaona ireo mpifidy mba hanoratra teny ratsy rosiana izay miisa litera telo eo anatin'ireo vatom-pifidianana mba hanoherana ny fanafoanana ny safidy ”manohitra azy rehetra” ary ny fandraisana anjara farafakeliiny indrindra takiana.
Ito ambany ito ny fifanakalozan-teny (Ros) teo amin'ireo mpamaky roa an'i tvoron:
Hitanao, tena miombon-kevitra tanteraka amin'ny mpamorona ity aho. Handeha hanao zavatra mitovy amin'izao mihitsy aza moa ny tenako, raha toa ka mba mankany aho. […]
Mba tonga saina ve ianao fa arakaraky ny hanimbana ny vatom-pifidianana no hahazoan'ny [Rosia Miray mpomba an'i Kremlin] seza bebe kokoa?
Inona izany, lalàna vaovao azontsika indray? Mahaliana.
Fa na ataoko hoe izany aza no izy, inona ary no sosokevitrao? Handeha ary hifidy ho an'i [Yabloko an'ny Grigory Yavlinsky] ve? Tena tsoriko fa izaho tsy handeha hifidy fotsiny tsotra izao – avelao ity hatsikana ity – izay efa fantatra mialoha ny valiny – hitranga tsy misy ahy. Sady hahazo ny zavatra iriany koa anie i Rosia iray na inona na inona e.
Eny, izay ny lalàna. Na iza na iza tsy nitranga, na nanimba ny vatom-pifidianana, na manary vato ho ana antoko tsy mandresy – nanome ny vatony ho an'ny mpitondra ho toy ny fanomezana izany olona izany (raha amin'ny tranga misy antsika, ho an'i Rosia Miray).
Ny sosokevitro dia ny mifidy ho ana antoko hafa izay mety ahiana hisongona ny [7% taham-pahafahana miditra ], tsaratsara kokoa, ho an'ireo ho tafiditra amin'ny faharoa na fahatelo. Samy ratsy avokoa izy ireo. Fa ny fomba tokana ahafahana manohitra dia ny mifidy ho azy ireo.
Izaho angamba toa hifidy ny legioma – [Ny Antoko Kaoministan'ny Federasiona Rosiana]. Na dia taona vitsivitsy lasa aza, mety nidaroka ny tenako aho noho izany. […]
[…] Eny ary, misaotra anao, tovolahy, fa tsy namaky nandritra ny alina iray manontolo [ny taratasin'i samizdat ] avy amin'i [Aleksandr Solzhenitsyn] sy i [Joseph Brodsky] toy ny zaza mba hifidy ireo Kaominista aho raha 37 taona. Tsy misy hevitra.